घुँयत्राे : ओलीबा हजुरले मधेसी दलका १२० जना अपराधीलाई छोड्ने र दीपक मनाङेलाई खेलकुद मन्त्री बनाउने ? – Yug Aahwan Daily
घुँयत्राे : ओलीबा हजुरले मधेसी दलका १२० जना अपराधीलाई छोड्ने र दीपक मनाङेलाई खेलकुद मन्त्री बनाउने ?
युग संवाददाता । १९ बैशाख २०७८, आईतवार १६:४४ मा प्रकाशित
ओलीबा हजुरले देश र जनताको निम्ति मधेसी दलका १२० जना अपराधीलाई छोड्ने र दीपक मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्री बनाउने जुन अशल र सदगुणि कार्य गर्नुभो । त्यसबाट हामी देशभरकै एमाले कार्यकर्ता बहुत खुशी छौँ ।
यो कार्यले तपाइँको लोकप्रियता सात समुन्द्रपारीसम्म फैलिएकोछ । र तपाइँको शिर उचो भएकोछ । हामी सदैव तपाइँको यस्तै कार्यबाट खुसी हुनेछौं भने हाम्रो पार्टीको नामपनि दिन दुई गुना रात चौगुना फैलिँदैछ । हजुरले आउने चुनावाँ विपक्षनै नरहने गरी मत ल्याउने जुन सपना देख्नु भाछ, त्यो सपना साकार गराउन यस्तै यस्तै काम गर्दै जानू भो भने हाम्ले चुनावाँ धेरै दुखपनि गर्नु नपर्ला ।
चरी र घैंटे पुलिसले नमार्देको भए हाम्रो पार्टी अझै कति गौरवशाली र महान बन्थ्यो होला ।साँच्चै भन्ने होभने चरी र घैंटेलाई इन्काउन्टर गर्ने पुलिसलाई कि त तपाइँले कारबाही गर्नुपर्छ कि उनलाई पनि पार्टीको
ठूलै नेता बनाउनु पर्छ । किनभने यस्ता मान्छेले चुनावाँ हतियार चलाउने काम गरे भने हाम्रा हार्ने खालका नेतालेनी चुनाव जित्नेछन् र सरकार बनाउन र दुईतिहाई बढी मतल्याउन मद्दत गर्नेछन् ।
ऐले हाम्रो सरकार बचाउन र विपक्षीको पत्तासाफ गराउन जसरी भ्रष्ट मधेसीहरको साथमा लागेर उनहरुको पाटीनै फोडेर जनतालाई खुसी दिलाउन आफ्नो सारा शक्ति खर्च गर्नुभो भोलिका दिनाँ काँग्रेसाट सांसद हुन भोट नदिनेलाई इट्टाभट्टाँ जलाएर मन्त्री समेत बन्या मान्छेहरू र त्यस्तै खाले योग्यता पुग्या माओवादी र अन्य पार्टीका मान्छेहरुलाई भित्र्याउनु पर्ने भा हुँदा त्यसतर्फका जानकार सल्लाकारहरलाई तम्तयार बनाएर काममा लगाई हाल्नुहोला ।
अन्यथा भोली तिनरु अरु पाटीयाँ रहेभने हाम्रो पार्टीको साख गुम्नेछ । त्यसकारण पनि यी काम पैला गरेर चुनाउ घोषणाँ गर्नु होला । भन्न त मान्छेले देशाँ कोरोनाले जनता भकभकी मर्दैछन् तर सरकार भने अपराधिहरुलाई साधु बनाउने खेलमा मस्तछन भन्दैछन् । तर ती भन्नेहरु भन्दै गर्छन् हजुरले आफ्नोकाम गर्दै जानोस् । हामी एमालेहरु हर्दम तपाइँको साथमा छौँ । कोरोनाको कामै हो फैलनेत फैलिरहोस् । जनता मरे मरी रहुन, हाम्लाई चुनावाँठ्याक्कै यति जनता भोट चाहिन्छ भन्ने छैन क्यारे हाम्लाइै ।
भोट हाल्या जनता मध्ये भन्दा बढी भोट आए पुगिहाल्यो हैन र ? मर्नु बाँच्नुसँग के सरोकार । त्यत्तिहो, राज्यको ढुकुटियाँ पैसाहोस् । हजुर,हजुरका मन्त्री र हामी कार्यकर्ताले माग्या बेलाँ पैसापाम त्यति भएछि हाम्लाई बाँकि छु मतलव । कहिलेकाँही हामी नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष कोषाध्यक्ष भा योजना भयो भने त्यसाँ पैसा पठाउने आदेश हजुरले गर्दे हाम्लाई पुगि गो ।
त्यसैले ओलीबा हजुर जे गर्नुहुन्छ । मन फुकाएर गर्नुस् हजुरलाई न संविधान लाग्छन कानुन । कसैले लगाउन खोजी नै हाल्यो भनेनी सर्वोच्चाँ हाम्रा मान्छे छँदैछन् । तीनले मुखभरीको जवाफ दि हाल्छन् नि । र त हामी भन्छौँ ओलीबा जिन्दावाद । ह्वाँका काम अमर रहुन् । कमिनिष्ट कस्ता हुन्छन् भन्ने जनताले था पाईरहुन् । कोरोना चम्केझैँ चम्केका ओलीबा जिन्दावाद !